ရန်အောင်ရဲ့ မွေးနေ့မှာ (၃)ပေပတ်လည်လောက်ရှိပြီး ကိုယ်တိုင်သေချာလုပ်ထားတဲ့ မွေးနေ့ကိတ်လေးနဲ့ အတူ ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ပိုင်ဇေရဲထွန်းရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ဇင်သဲနိုင် – Suehninsi
ဒီဇင်ဘာ(၁၄)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်သလို ကျရာဇာတ်ရုပ်တွေမှာ သရုပ်ဆောင်ပီပြင်လွန်းတဲ့ အကယ်ဒမီမင်းသားကြီး ရန်အောင်ရဲ့ အသက်(၅၄)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ ကိုရန်လေးလို့ အားလုံးက ရင်းရင်းနှီးနှီးခေါ်ကြတဲ့
မင်းသားကြီးရန်အောင်ကတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ယနေ့အချိန်ထိ ပရိသတ်တွေရဲ့တစ်ခဲနက်အားပေးဝန်းရံမှုတွေကို ရရှိထားပြီး ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာရိုက်ကူးကာ ထက်ဆင့်အကယ်ဒမီအနုပညာရှင်အဖြစ်
အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နေသူပါပဲ..။ ကိုရန်လေးကတော့ သူ့ရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ ကိုဗစ် ကုသတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဧရာဝတီစင်တာမှာ အလှူငွေတွေလှုဒါန်းကုသိုလ်ယူခဲ့သလို ပရိသတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆွေတွေကလည်း မွေးနေ့တောင်းစကားလေးတွေ
ပြောထားကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်နော်..။ အခုတစ်ခါမှာလည်း ပိုင်ဇေရဲထွန်းရဲ့ ချစ်ဇနီးချောလေးဖြစ်တဲ့ ဇင်သဲနိုင်ကလည်း ကိုရန်လေးအတွက် ကိုရန်လေးရဲ့ပုံတူနဲ့ အနုစိတ်ဆန်တဲ့ ၃ပေကိတ်ကြီးကို
ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်နော်..။ “ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် အနုစိတ်ဖန်တီးဖြစ်သော ၃ပေကိတ်ကြီး🎂🎂🎂 Happy Birthday Ako🎂 My Taste by THAE. .” ဆိုပြီး ကိုရန်လေးအတွက် မွေးနေ့ကိတ်လေး ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပေးထားတဲ့
ပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ စားရက်စရာမရှိလောက်အောင်ကို လက်ရာမြောက်လွန်းတဲ့ ကိုရန်လေးအတွက် ဇင်သဲနိုင်ရဲ့မွေးနေ့ကိတ်ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်း သဘောကျနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်နော်..။
ဒီဇငျဘာ(၁၄)ရကျနလေ့ေးကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတျောဖွဈသလို ကရြာဇာတျရုပျတှမှော သရုပျဆောငျပီပွငျလှနျးတဲ့ အကယျဒမီမငျးသားကွီး ရနျအောငျရဲ့ အသကျ(၅၄)နှဈပွညျ့ မှေးနရေ့ကျမွတျလေးပဲ ဖွဈပါတယျနျော..။ ကိုရနျလေးလို့ အားလုံးက ရငျးရငျးနှီးနှီးချေါကွတဲ့
မငျးသားကွီးရနျအောငျကတော့ ငယျစဉျကတညျးက ယနအေ့ခြိနျထိ ပရိသတျတှရေဲ့တဈခဲနကျအားပေးဝနျးရံမှုတှကေို ရရှိထားပွီး ဇာတျကားပေါငျးမြားစှာရိုကျကူးကာ ထကျဆငျ့အကယျဒမီအနုပညာရှငျအဖွဈ
အောငျမွငျစှာ ရပျတညျနသေူပါပဲ..။ ကိုရနျလေးကတော့ သူ့ရဲ့မှေးနလေ့ေးမှာ ကိုဗဈ ကုသတိုကျဖကျြရေးအတှကျ ဧရာဝတီစငျတာမှာ အလှူငှတှေလှေုဒါနျးကုသိုလျယူခဲ့သလို ပရိသတျတှနေဲ့ မိတျဆှတှေကေလညျး မှေးနတေ့ောငျးစကားလေးတှေ
ပွောထားကွတာလညျး တှရေ့ပါတယျနျော..။ အခုတဈခါမှာလညျး ပိုငျဇရေဲထှနျးရဲ့ ခဈြဇနီးခြောလေးဖွဈတဲ့ ဇငျသဲနိုငျကလညျး ကိုရနျလေးအတှကျ ကိုရနျလေးရဲ့ပုံတူနဲ့ အနုစိတျဆနျတဲ့ ၃ပကေိတျကွီးကို
ကိုယျတိုငျလုပျပွီး မှေးနဆေု့တောငျးပေးလိုကျပွနျပါတယျနျော..။ “ဂုဏျယူစှာဖွငျ့ အနုစိတျဖနျတီးဖွဈသော ၃ပကေိတျကွီး🎂🎂🎂 Happy Birthday Ako🎂 My Taste by THAE. .” ဆိုပွီး ကိုရနျလေးအတှကျ မှေးနကေိ့တျလေး ကိုယျတိုငျဖနျတီးပေးထားတဲ့
ပုံရိပျလေးတှကေို မြှဝထေားတာပဲ ဖွဈပါတယျနျော..။ စားရကျစရာမရှိလောကျအောငျကို လကျရာမွောကျလှနျးတဲ့ ကိုရနျလေးအတှကျ ဇငျသဲနိုငျရဲ့မှေးနကေိ့တျပုံရိပျလေးတှကေို ပရိသတျတှအေားလုံးကလညျး သဘောကနြကွေတာ တှရေ့ပါတယျနျော..။
Source : Zin Thee Naing’s Facebook
အမေဖြစ်သူနဲ့ အမဆီက တန်ဖိုးကြီး စိန်လက်စွပ်လေး မွေးနေ့လက်ဆောင်ရခဲ့လို့ အရမ်းပျော်နေတဲ့ G Fatt
ချစ်ဇနီးလေး မြတ်ရတနာကျော်ရဲ့ လက်ကိုဆွဲပြီး ကမ္ဘာအနှံ့ အတူလျောက်လည်ခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေကို မျှဝေခဲ့တဲ့ အာဘွိုင်း